Iyada oo hadiyad lagu qiimeeyo $2.3 bilyan, Hay'ada McKnight waa macaamiil wax ku ool u ah maamulayaasha maaliyadaha. Waxaan u isticmaali karnaa mowqifkan sidii aan kor ugu qaadi lahayn fikirka isku dhafan ee deegaanka, arrimaha bulshada, iyo maamulka shirkadeed (ESG) arrimaha maamulayaasha hantida aan shaqaaleyno.
Waa kuwan sida aan u sameyno:
Qiimee iyo Heerka
Qiimee oo qiimee dhammaan maamulayaasha maalgashiga iyaga Awoodda deegaanka, bulshada, iyo awoodaha (ESG).
Su'aalo ka jawaab
Su'aalaha ka jawaaba awoodda ESG ee raadinta maamulayaasha cusub iyo kulammada qof ahaaneed. Ficilkan fudud ee su'aalaha tooska ah ee aad waydiisaneyso wuxuu keeney faham qoto dheer oo ku saabsan sida ay maamulayaashu u maalgashadaan, isla markiiba ay isbedelaan. Sanadihii ugu danbeeyay lix maamulayaal waxay soo bandhigeen miisaaniyad cusub oo ESG ah ama waxay dhisayaan xeelado cusub.
La-taliyayaal Gudoomiyaha iyo Mercer waxay gacan ka geysteen inaanu ku wargalinno saameynta aan ku laheyn habka maalgelinta, la talinta shaqaalaha hay'adda iyo qabashada taxadar la'aanta. Dhiirigelinta ayaa kaalin ka qaadata kaalmada ugu muhiimsan ee ka caawinta McKnight dhis dhuun xoog leh oo isku dheelitiraya khatarta dhaqaale, waxbarashada, iyo saameynta saameynta.
Maamulayaasheena dhaqaalaheena waa lamaanayaal muhiim u ah. Sannadkii 2013, Mellon Capital Management wuxuu abuuray Istaraatijiyadda Wax-qabadka Carbon, sanduuq dhaqaale oo kala duwan. Iyadoo $ 100 milyan oo ka mid ah maalgelinta abuurka laga helay McKnight, Mellon waxay samaysay qaab ka sarreeya koronto-dhaliyeyaasha waxtar leh ee gaaska aqalka dhirta lagu koriyo iyo kuwa hooseeya ee aan waxtar lahayn. Waxay sidoo kale ka reebaysaa shirkadaha dhirta macdanta. Hannaanku wuxuu abuuray awood cusub oo ESG gudaha Mellon waxaana uu billaabay badeeco cusub oo loogu talagalay maalgashadayaasha hay'adaha: Guul ku guuleysiga macmiilka iyo maamulaha maaliyadda. Tani waxay muujinaysaa sida ay maalgashadayaashu u leeyihiin awood ay ku dhisaan suuqyo cusub. (XUSUUS: BNY Mellon waxay soo saartay daraasad kiis la xidhiidha, Falanqaynta Qiimeeynta Sawirka: Iskaashiga Istaraatiijiyada Waxtarka Waxtarka Carbon, bishii May 2016.)